iOS 4 ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Tamin'ny taona 2010 Apple dia namoaka ny iOS 4 miaraka amina endri-javatra vaovao maherin'ny 100 izay nitondra fahaiza-miasa amin'ny rafitra fiasa finday hita amin'ny iPhone, iPad, ary iPod Touch. ny multitask Io no fanatsarana tena lehibe indrindra nahafahanay nampiasa rindranasa tany aoriana rehefa nampiasa fampiharana hafa. Fanatsarana lehibe iray hafa ho an'ny iOS 4 ny fisehoan'ny fampirimana, toerana ahafahantsika mampiditra rindranasa marobe mitovy karazana hitazomana ny volavolan-dalàna ary hisorohana ny korontana misy pejy feno sary masina.
ny Gonzalo R. hace 9 taona .
Omaly dia niresaka momba ny fitaovana TinyCFW izahay, programa iray noforonin'ny mpamorona ny TinyUmbrella ho an'ny sakaizany, avy amin'ny ...
Sintomy ny iOS, Redsn0w, Sn0wbreeze, TinyUmbrella
Tutorial: Atsimbana ny iOS 5 ka hatramin'ny iOS 4.3.3
ny Gonzalo R. hace 10 taona .
Efa nanatsara ny endrika 5.0 ve ianao ary lany ny jailbreak tsy voaroaka? Misy ve ny rindranasao tsy mandeha ary ...
Tutorial: Atsimbana ny iOS 5 ka hatramin'ny iOS 4.3.3 (iPad 1 sy iPad 2)
ny Vaovao IPad hace 10 taona .
Maro aminareo no efa manana iOS 5 napetraka ao amin'ny iPads sy iPads 2 anao, raha mbola tsy ...
FANAMARIHANA. TOTORIASA VOAFADY -> Ampiasao ity rohy ity Maro aminareo no efa manana iOS 5 napetraka ao amin'ny iPhone, raha ...
Tutorial: ny fomba fanaovana jailbreak untethered mankany amin'ny iOS 4.3.3 amin'ny fampiasana Redsn0w
Amin'ity fampianarana ity dia hahafahanao manamboatra jailbreak tsy mitambatra amin'ny iOS 4.3.3 avy amin'ny Windows sy amin'ny Mac. Miasa amin'ny iPhone 4, iPhone 3GS,…
Tutorial: ny fomba fanaovana jailbreak untethered mankany amin'ny iOS 4.3.1 amin'ny fampiasana Redsn0w
Amin'ity fampianarana ity dia hahafahanao manamboatra jailbreak tsy mitambatra amin'ny iOS 4.3.1 avy amin'ny Windows sy amin'ny Mac. Miasa amin'ny iPhone 4, iPhone ...
Whited00r dia mitondra ny iOS 4.3 ho an'ny iPhone 3G sy 2G
Araka ny fantatrao, ny iPhone 3G dia tavela tamin'ny fanavaozana ny iOS 4.3 farany farany, fa ny tovolahy avy amin'ny ...
Apple dia mamela ny iPhone 3G tsy misy iOS 4.3
Ofisialy io, ny iOS 4.3 betas dia tsy nanohana ny iPhone 3G (na ny iPod Touch 2G) fa ...
Fihodinana am-ponja iOS 4.2.1 feno
iPhone 2G (iPod Touch 1G) 1. Azonao atao ny mampiasa firmware Whited00r manokana, izay manampy ireo fiasa vaovao rehetra an'ny iOS ...
Tutorial: mamorona firmware 4.2.1 manokana miaraka amina jailbreak tsy voaro amin'ny Sn0wbreeze 2.2 (Windows)
Amin'ity fampianarana ity dia hahafahanao mamorona firmware 4.2.1 manokana miaraka amina jailbreak tsy mitambatra avy ao Windows. Nampiasaina ho an'ny: iPhone 3G ...